eHimalayatimes | अन्तर्वार्ता | ‘आँतमा इमानदारी र काँधमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ’ : डा. मीन बानियाँ
19th February | 2019 | Tuesday | 10:00:59 AM
‘आँतमा इमानदारी र काँधमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ’ : डा. मीन बानियाँ
विनोद दाहाल POSTED ON : Saturday, 23 June, 2018 (2:06:51 PM)
डा. मीन बानियाँ युवा अर्थशास्त्री हुन् । २०३० सालमा ओखलढुंगाको बरुणेश्वर गाविस ढुस्केमा पिता भीमबहादुर र माता नन्दमाया बानियाँका जेठा छोराका रूपमा उनको जन्म भएको हो । यही गाविसको रामपुरमा रहेको बरुणेश्वर माविबाट उनले एसएलसी गरे जुन विद्यालयसम्म जान उनले दैनिक एक घण्टा र बेलुका फर्कन उकालो डेढ घण्टाजति हिँड्नुपथ्र्यो ।
एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पसबाट बिए र कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेपछि उनले केही वर्ष काठमाडौंको सरस्वती क्याम्पसमा अध्यापन गरे । यसपूर्व अस्थायीरूपमा उनले केही समय सरकारी जागिर पनि खाए । यसपछि उनलाई जागिरभन्दा पढाइ ठूलो लाग्यो र उनी गरिरहेको काम छोडेर अध्ययनका क्रममा अमेरिका पुगे । त्यहाँ केही समय बसेपछि उनी भारत फर्किए र त्यहाँको सिंहानिया विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरे । विद्यावारिधि सकेपछि उनी नेपाल फर्किए र विभिन्न अनुसन्धानमूलक काम गर्न थाले । अहिले पनि उनी यस्तै अनुसन्धानमूलक काम गरिरहेका छन् । हाल उनी पिएचडी डक्टर एण्ड स्कलर एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् ।
उनले हालै प्रोफेसर सतिश ओझासँग मिलेर संसद् सचिवालयमा रणनीतिक योजना तयार पारेर बुझाए । यो संसद् सचिवालयले सांसदहरूले के गर्ने भनेर बनाउने योजना हो । यस्तै, प्रकृतिका काम राष्ट्रले गर्न चाहे आफू त्यो जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रले चाहे आर्थिक सुझाव र सल्लाह दिन तयार छु ।’
लोकतन्त्र सानाठूला, धनी गरीब तथा आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच हुने पद्धति हो भन्छन् उनी तर अन्तर्वार्ताकै कारण कार्यक्रमै बन्द हुनेजस्ता कारणले नेपालमा लोकतन्त्रका बारेमा सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा यसको भविष्यका बारेमा उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो प्रारम्भिक चरणमा छ, अहिले नै यसै हो भन्न सकिँदैन । विरोध र समर्थनमा बोल्ने समय भइसकेको छैन ।’ यसको अभ्यासमै त्रुटी भएको हो त ? भनेर सोद्दा उनले भने, ‘अभ्यासमै त्रुटी भयो त नभनौं, यो पूर्णरूपमा परिपक्व बन्न नसकेको मात्र हो । बेलायत, अमेरिकाजस्ता हामीभन्दा धेरै पहिले नै प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेका राष्ट्रमा पनि अभ्यासमै छौँ भन्छन्, हाम्रोमा त भर्खर थालनी मात्र भएको छ ।’
‘सत्तामा पुगेपछि सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउने र विपक्षमा बस्नुप¥यो भने सरकारलाई गालीमात्र गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति ठीक होइन । यसका लागि नीतिगत दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । राजनीतिले देश चलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्रले देश चलाएको छ । कर्मचारी पार्टी र दलको नीति र कार्यक्रमको भन्दा सत्तासीन नेताको समर्थनमा लाग्ने परम्परा हाम्रोमा देखिएको छ’, उनी भन्छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टको भविष्यबारे सोध्दा उनले भने, ‘सिद्धान्त बुझेर होइन धेरै व्यक्ति स्वार्थले यसको सदस्य बनेका छन् । उनीहरू कहिले फुट्छन् कहिले जुट्छन् । उनीहरू सिद्धान्त विपरीत निजी सम्पत्ति थुपारिरहेका छन् । नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट पुष्पलाल श्रेष्ठको पनि नाम र फोटो मात्र बाँकी छ अब । सर्वहारा वर्गका नेता पनि सामन्तजस्तै सुविधाभोगी बन्न पुगेका छन् । कमाउन कम्युनिस्ट बनेका र यसको नाममा राजनीति गर्नेहरूका कारण नेपालमा उनीहरूको भविष्य छ्रैन ।’
कम्युनिजमका बारेमा यस्तो ठोकुवा गर्ने बानियाँ देशको भविष्यबारे भने निराश छैनन् । उनी भन्छन्, ‘रणानीतिक योजना बनाए अझै पनि देश खराब अवस्थामा छैन । सिंगापुरका एकजना व्यक्ति ली क्वान यूका कारण त्यो देश सिंगापुर बनेको हो । इच्छाशक्ति भएका नेता पाएको खण्डमा यो देश बनाउन अझै सकिन्छ । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले नेपाली जनताका अपेक्षा धेरै छन् । यसबेला केही गर्न नसक्ने हो भने चाहिँ देशको दुर्भाग्य हुनेछ । ’
‘आर्थिक कारणले देश असफल हुन्छ कि’ भनेर सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘अहिले यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र कमजोर छ । यो आइसियूको बिरामीजस्तो छ । अहिले प्रदेश र संघबीच राजस्व असुलीमा द्वन्द्व होलाजस्तो देखिन्छ तर यो हेर्न बाँकी विषय हो । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिन सकेको छैन । उनले निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा साथ लिन सक्नुपथ्र्यो । यसले पनि देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ ।’ राष्ट्रले चाहेमा आफू आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुरूपको दायित्व निर्वाह गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् । आफ्नो ज्ञानको उपयोग गर्न पार्टीको साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन पनि आफू तयार रहेको उनले बताए । उनी भविष्यमा आफू रानीतिमा सक्रिय हुने कुरालाई नकारिहाल्दैनन्, घुमाउरो गरी स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले म सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमै सक्रिय छु र भइरहन्छु । पछि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछु ।
उनी विद्यार्थी कालदेखि नै आफूले पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको कुरा सम्झिन्छन् तर राजनीतिलाई निरन्तरता दिन भने उनले सकेनन् । आर्थिक कारणले आफू राजनीतिमा सक्रिय हुन नसकेको उनी बताउँछन् । वर्तमान राजनीतिमा आर्थिक चलखेल देख्छन् डा. बानियाँ, ‘पार्टीलाई सहयोग भनेर कुनै पदको राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा मागिन्छ । त्यो पैसा पनि पार्टीमा भन्दा पनि व्यक्तिको पोल्टामा जान्छ । यो देखिएकै कुरो हो । हरेक पार्टीमा यस्तै प्रवृत्ति छ । पदमा पुग्न पैसाको चलखेल हुन्छ ।’
पैसा तिरेर पाएको पदले देश विकास नहुने ठम्याइ छ डा. बानियाँको, ‘ऊ लगानी उठाउन खोज्छ । यो व्यापारमा परिणत हुन्छ ,यसले देशहित हुँदैन । अहिले यस्तै भइरहेको छ ।’
‘नेपालमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद आउँदैन’, उनले ठोकुवा गरे । नेपाली कांग्रेसका बारेमा उनले भने, ‘गुटबन्दी यसरी नै रहिरहने हो भने यो पार्टी अझै कमजोर बन्छ । जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्छन् । कम्युनिस्ट एक भएको अहिलेको अवस्थामा हिजोका कुरा बिर्सेर पार्टी एकता गरिनुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र नै समाप्त हुनसक्छ ।’
पार्टी एक भएर चल्ने हो भने नेपाली कांग्रेस अझै पनि अगाडि आउनसक्ने देख्छन् उनी । ‘कम्युनिस्ट पनि सधैँ लोकप्रिय रहिरहन्छ भन्ने छैन । चुनावमा हारजित स्वाभाविक कुरो हो । अब कांग्रेस जनतामाझ जानुपर्छ । आत्माआलोचना गरेर संगठन सुदृढ गर्नतिर लाग्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
देश विकासका लागि तपाईंसँग कुनै योजना छन् ?’ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ उनले यसरी दिए, ‘देश विकासका काम कसैले पनि एक्लै गर्न सक्दैन, म पनि कुनै काम एक्लै गर्न सक्दिन तर सरकारलाई सुझाव दिनसक्छु । हाइड्रोपावर, पर्यटन, कृषि आदिबाट हाम्रो देशले लाभ लिन सक्छ । राष्ट्रले यस्ता योजना बनाउने जिम्मेवारी दिन्छ भने म त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु ।’ व्यक्तिगत स्वार्थले देश माथि उठ्न नसकेको उनको ठम्याइँ छ । नेतामा इच्छाशक्ति भए देश माथि उठ्नसक्ने उनी देख्छन् तर त्यसको अभाव खड्किरहेको उनी बताउँछन् ।
उनको विषय अर्थशास्त्र हो । त्यसैले राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्न चाहे उनले मैद्रिक नीति र कर नीतिका कारण मानिसले कतै लगानी नगरी घरमा पैसा राखेर बसेको उनले बताए । करमुक्त लगानी गर्न केही समयका लागि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गराउनुपर्ने र उद्योग, कृषि आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको दुष्टिकोण छ । अहिले लगानीका बाटा कसिँदै गएका देख्छन् उनी । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आए रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ र जनजीवनमा पनि सुधार हुन्छ भन्ने सोचेका छन् डा. बानियाँले । ‘हिजो निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्र आज दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायतका सारा मालसामान आयात गरिरहेको छ । अहिले विप्रेषणले देश चलिरहेको छ तर यो पनि हुण्डीका कारण राम्रो अवस्थामा छैन । देशको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको आचरण सुधार्नुपर्छ’, उनी नेतृत्व वर्गलाई सुझाव दिन्छन् ।
डा. मीन बानियाँ काम गर्न विदेश गएनन् । अब पनि अर्काका देशमा गएर काम गर्ने सोच छैन उनको । उनी देशप्रति आशावादी भएरै यहीँ बसेको बताउँछन् । उनी अरूलाई निराश नबन्न सुझाव दिन्छन् । ‘देशमै अवसर छन् । बाहिर पढ्न र सिक्न जाँदा हुन्छ तर उतै पलायन नबनौं । आफ्नो विज्ञता देशमै प्रयोग गरौं किनकि हाम्रो देश बनाउन बाँकी छ’, उनी युवालाई सुझाव दिन्छन् । उनले आफ्नै देशमा रोजगारीका धेरै सम्भावना देखेका छन् । ‘हाम्रा कामबाट राष्ट्र लाभान्वित बन्न सक्नुपर्छ । पर्यटन, व्यापार, कृषि, उद्योगजस्ता काम यहीँ गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको प्रकृतिको उपयोग गर्ने हो भने मात्र पनि देश समृद्ध बन्न सक्छ,’ डा. मीन बानियाँ आफ्नो तर्क राख्छन् ।
विदेशमा गएका बेलामा मात्र स्वदेशको महŒव बुझिन्छ भन्दै उनी भावी पिँढीलाई बाहिर गएर सिकेको सीप आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन् । स्वदेशको माटोको गन्ध आउने गरी देश विकासका काम गर्न उनी सबैलाई सल्लाह दिन्छन् । ‘यसका लागि हामी सबैले आतमा इमानदारी र काँधमा जिम्मेवारी सम्झेर राष्ट्रको भारा तिरौं’ उनी कुराको बिट मार्छन् । देश उनले सोचेजस्तो बनोस् । हार्दिक शुभेच्छा ।